Home Products DataNumen Exchange Recovery Ny Exchange dia ao amin'ny Mode Recovery
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny hafatra "Hafatra ao amin'ny Mode Recovery" izao
Microsoft Outlook 2003 sy ny kinova vaovao dia manolotra endrika vaovao antsoina Fomba fifanakalozana cache, izay raha ny marina dia fanatsarana ireo lahatahiry ivelan'ny rindranasa ao amin'ny kinova taloha an'ny Outlook. Fomba fifanakalozana cache manome fiasa maro hanamboarana ny fampifanarahana sy ny asa ivelan'ny tranonkala mahomby sy mora. Iray amin'izany Exchange Recovery Mode.
Rehefa ny Exchange server, database, na mailbox mifandraika amin'ny fampirimana ivelan'ny seranana (.ost) fisie dia avereno, na misy tsy fitoviana eo amin'ny boaty Exchange sy ny OST manaova rakitra, avy eo raha toa ianao ka manana kinova Outlook 2002 na taloha kokoa, na mihazakazaka Outlook 2003 sy kinova vaovao fa manana Fomba fifanakalozana cache kilemaina, ary misafidy ny hiasa amin'ny Internet, dia hamorona vaovao i Outlook OST apetraho amin'ny boaty mailaka vaovao. Ilay taloha OST Tsy ho voafafa ny rakitra, fa tsy azonao idirana ny angona ao. Aorian'izay rehefa misy indray ny boaty mailaka tany am-boalohany, afaka miditra amin'ny data taloha ianao OST rakitra, fa ireo ao amin'ny vaovao OST tsy ho azo idirana intsony ny rakitra. Raha mila miditra amin'ny data ianao OST rakitra, mila manitsy ny mombamomba an'i Outlook ianao hamerenana azy ireo amin'ny mifanitsy aminy OST fisie, izay tena manelingelina.
Na izany aza, raha mampiasa ny Outlook 2003 sy ny dikan-teny manaraka ianao, ary ny Fomba fifanakalozana cache no alefa, dia ho hitanao izao hafatra fampitandremana manaraka izao rehefa miverina na tsy mifanaraka ny boaty mailakao Exchange:
Ny Exchange dia ao anatin'ny maody fanarenana ankehitriny. Azonao atao ny mifandray amin'ny mpizara Exchange anao amin'ny alàlan'ny tamba-jotra, miasa ivelan'ny Internet, na manafoana ity logon ity.
izay manondro ny Outlook sy Exchange dia ao izao Exchange Recovery Mode.
Rehefa ao Exchange Recovery Mode, manana safidy roa ianao:
Maody ivelan'ny seranana. Raha mifidy ianao Asa tsy miasa, azonao atao ny miditra amin'ny data taloha OST rakitra, fa tsy amin'ny mpizara Exchange. Ilay taloha OST ny rakitra dia mbola azo idirana amin'ny maody ivelan'ny seranana.
Mode online. Raha mifidy ianao Connect, azonao atao ny miditra amin'ny mpizara Exchange, fa tsy amin'ny taloha OST rakitra. Raha te hiditra data taloha ianao OST rakitra, azonao atao ny mivoaka ny Outlook sy ny start indray ao Mode modely.
Noho izany, amin'ny fisafidianana safidy isan-karazany dia azonao atao ny miditra amin'ilay taloha OST rakitra na boaty mailaka vaovao ao amin'ny mpizara Exchange mifantina.
In Exchange Recovery Mode, ianao dia afaka ovay ny taloha OST ataovy anaty rakitra PST hamindra ny angon-drakitra ao amin'ny boaty mailaka Exchange vaovao.
Raha avy eo ny boaty Exchange taloha dia mifamatotra amin'ny taloha OST misy indray ny rakitra, avy eo amin'ny fisafidianana Connect, hivoaka ianao Exchange Recovery Mode ho azy.
Na izany aza, raha tsy misy maharitra ny boaty mailaka, na tsy mifanaraka amin'ny taloha OST fisie noho ny OST mametraka kolikoly, avy eo ny fomba hivoahana Exchange Recovery Mode ary ataovy toy ny mahazatra ny fomba fiasan'ny Outlook indray? Ity ambany ity ny valiny.
Mivoaha amin'ny fomba fanarenana Exchange ary miasa indray mazàna:
Raha ny mailaka Exchange dia tsy misy mandrakizay, na tsy mifanaraka amin'ny taloha OST fisie noho ny kolikoly ataonao, avy eo azafady mba ataovy izao mba hivoahana Exchange Recovery Mode ary avelao hiasa ara-dalàna indray i Outlook:
Akatona ny Microsoft Outlook sy ny rindranasa hafa mety hiditra amin'ny taloha OST hametraka.
Mitadiava ny taloha OST hametraka. Azonao atao ny mampiasa ny Mitady miasa ao amin'ny Windows hikarohana ny OST rakitra. Na mikaroha ao amin'ny toerana efa voafaritra ho an'ny fisie.
Vonjeo ny antontan-kevitra ivelan'ny Internet amin'ny taloha OST hametraka. Ilay taloha OST Ny rakitra dia misy tahiry ivelan'ny seranana, ao anatin'izany ny hafatra mailaka sy ny zavatra hafa rehetra, ao amin'ny boaty mailaka Exchange anao, izay tena ilaina aminao. Mba hanavotana ireo angona ireo dia tsy maintsy atao izany fampiasana DataNumen Exchange Recovery mba scan ny taloha OST ataovy, avereno ny angon-drakitra ao anatiny, ary tahirizo ao anaty rakitra Outlook PST hahafahanao miditra amin'ny fomba mora sy mahomby amin'ny hafatra sy ny zavatra rehetra ao amin'ny Outlook.
Ampidino ny taloha OST hametraka. Mba hisorohana ny fiarovana dia aleo averinao alefa izy.
Vonoy ny maody fifanakalozana cache.5.1 A.tart Outlook.
5.2 Eo amin'ny Tools sakafo, tsindrio Kaonty mailaka, Tsindrio Jereo na ovao ny kaonty e-mail misy anao, ary tsindrio avy eo Manaraka.
5.3 Ao amin'ny Outlook dia manodina mailaka ho an'ireo kaonty ireo amin'ny filaharana manaraka lisitra, kitiho ny kaonty mailaka Exchange Server, ary avy eo kitiho Change.
5.4 Eo ambanin'ny Microsoft Exchange Server, kitiho mba hamafana ny Mampiasà fomba fifanakalozana cache jereo ny boaty.
5.5 Mivoaha amin'ny Outlook.
Ovao ny anarana na mamafa ny taloha OST hametraka.
Alefaso ny maody fifanakalozana cache.7.1 A.tart Outlook.
7.2 Eo amin'ny Tools sakafo, tsindrio Kaonty mailaka, Tsindrio Jereo na ovao ny kaonty e-mail misy anao, ary tsindrio avy eo Manaraka.
7.3 Ao amin'ny Outlook dia manodina mailaka ho an'ireo kaonty ireo amin'ny filaharana manaraka lisitra, kitiho ny kaonty mailaka Exchange Server, ary avy eo kitiho Change.
7.4 Eo ambanin'ny Microsoft Exchange Server, tsindrio raha hampiasa ny Mampiasà fomba fifanakalozana cache jereo ny boaty.
7.5 Mivoaha amin'ny Outlook.
Manangana vaovao indray OST File. Restart Outlook ary alao antoka fa marina ny fikirana ho an'ny kaonty boaty Exchange ao amin'ny Outlook, ary afaka mifandray amin'ny mpizara Exchange anao amin'ny fomba mahomby i Outlook. Avy eo alefaso / raiso ny mailakao amin'ny boaty mailaka Exchange mifandraika amin'izany, izay hamela an'i Outlook hamorona fisie fampirimana ivelan'ny vavao ho azy ary hampifanaraka ny tahiriny amin'ny boaty mailakan'ny Exchange. Raha tsy mandeha io fomba io, dia tsy marina ny mombamomba anao ankehitriny, ary ianao tsy maintsy mamafa azy ary mamorona vaovao, toy izao manaraka izao:
8.1 Akatona ny Microsoft Outlook.
8.2 Tsindrio Start, ary tsindrio avy eo Takelaka fikirakirana.
8.3 Tsindrio Mivadika amin'ny Jery Klasika raha mampiasa Windows XP na kinova ambonimbony kokoa ianao.
8.4 Tsindrio indroa Mail.
8.5 Ao amin'ny Fametrahana mailaka fanovozan-kevitra, tsindrio Asehoy ireo profil.
8.6 Misafidiana iray amin'ireo mombamomba diso ao amin'ilay lisitra ary kitiho Esory mba hanesorana azy.
8.7 Avereno ny 8.6 mandra-pikatsoan'ny mombamomba anao tsy mety rehetra.
8.8 Tsindrio Add mamorona profil vaovao ary manampy kaonty mailaka arakaraka ny fipetrany ao amin'ny mpizara Exchange.
8.9 A.tart Outlook ary avereno ampifanaraho ny boaty mailanao Exchange, hivoaka ianao Exchange Recovery Mode.
Ampidiro ao amin'ny dingana 3 ny angona. Rehefa avy mivoaka ianao Exchange Recovery Mode, tazomy ilay vaovao OST fisokafana ny boaty mailaka Exchange, ary sokafy ny rakitra PST novokarina tamin'ny dingana 3 miaraka amin'i Outlook. Satria misy ny angon-drakitra sitrana rehetra taloha OST rakitra, azonao atao ny maka tahaka ireo zavatra ilaina amin'ny vaovao OST fisie raha ilaina.